တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့မှာ ငပလီကမ်းခြေက ဘီကီနီဝတ်စုံနဲ့ အမိုက်စားပုံလေးတွေတင်လိုက်တဲ့ နေခြည်ဦး – Askstyle
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့မှာ ငပလီကမ်းခြေက ဘီကီနီဝတ်စုံနဲ့ အမိုက်စားပုံလေးတွေတင်လိုက်တဲ့ နေခြည်ဦး
Beauty blogger မလေးချီချီကတော့ မိန်းကလေးတွေရဲ့အချစ်တွေအားလုံးကို သိမ်းပိုက်ရရှိထားသူလေးပါ။ သူမဟာ အနုပညာလောကမှာလည်း အချိန်တိုအတွင်းအောင်မြင်မှုတွေရရှိထားသူပါ။ သွက်သွက်လက်လက်နဲ့စိတ်ထားဖြူစင်လွန်းတာကြောင့် အနုပညာရှင်များကလည်း ချစ်ခင်နေရတာပါ။
လတ်တလောမှာလည်း အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ မလစ်လပ်အောင်လုပ်ဆောင်နေတာပါ။ အဘက်ဘက်မှာတော်လွန်းတဲ့သူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုစိတ်ဓာတ်လေးတွေကတော့ပရိသတ်တွေအားကျအတုယူစရာပဲပါ။ ချီချီကတော့ပရိသတ်တွေကိုလှစေချင်ရုံသာမကသူမကိုယ်တိုင်လည်းအလှဆုံးနေထိုင်တက်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။သူ့ရဲ့ပွင့်လင့်ပြီးဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားလေးကြောင့်လည်းပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်ကိုအပြည့်ရထားပြီးအောင်မြင်နေတာပါ။
ဒီနေ့မှာတော့ နေခြည်ဦးက “အချစ်လား? သူ vacation ထွက်နေတယ်… ” ဆိုပြီး ငပလီကမ်းခြေမှာ ဘစ်ကနီ နဲ့ အရမ်းလန်းနေတဲ့ပုံလေးတွေတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးအတွက် နေခြည်ဦးရဲ့ ကမ်းခြေရောက်ပုံရိပ်လေးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Beauty blogger မေလးခ်ီခ်ီကေတာ့ မိန္းကေလးေတြရဲ႕အခ်စ္ေတြအားလုံးကို သိမ္းပိုက္ရရွိထားသူေလးပါ။ သူမဟာ အႏုပညာေလာကမွာလည္း အခ်ိန္တိုအတြင္းေအာင္ျမင္မႈေတြရရွိထားသူပါ။ သြက္သြက္လက္လက္နဲ႔စိတ္ထားျဖဴစင္လြန္းတာေၾကာင့္ အႏုပညာရွင္မ်ားကလည္း ခ်စ္ခင္ေနရတာပါ။
လတ္တေလာမွာလည္း အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈေတြ မလစ္လပ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနတာပါ။ အဘက္ဘက္မွာေတာ္လြန္းတဲ့သူ႔ရဲ႕ႀကိဳးစားမႈစိတ္ဓာတ္ေလးေတြကေတာ့ပရိသတ္ေတြအားက်အတုယူစရာပဲပါ။ ခ်ီခ်ီကေတာ့ပရိသတ္ေတြကိုလွေစခ်င္႐ုံသာမကသူမကိုယ္တိုင္လည္းအလွဆုံးေနထိုင္တက္တဲ့သူတစ္ေယာက္ပါ။သူ႔ရဲ႕ပြင့္လင့္ၿပီးျဖဴစင္တဲ့စိတ္ထားေလးေၾကာင့္လည္းပရိသတ္ေတြရဲ႕အခ်စ္ကိုအျပည့္ရထားၿပီးေအာင္ျမင္ေနတာပါ။
ဒီေန႔မွာေတာ့ ေနျခည္ဦးက “အခ်စ္လား? သူ vacation ထြက္ေနတယ္… ” ဆိုၿပီး ငပလီကမ္းေျခမွာ ဘစ္ကနီ နဲ႔ အရမ္းလန္းေနတဲ့ပုံေလးေတြတင္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ ေနျခည္ဦးရဲ႕ ကမ္းေျခေရာက္ပုံရိပ္ေလးေတြကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။